[MMAnime] The Misfit of Demon King Academy : The Misfit of the Demon King Academy ❤
The Misfit of the Demon King Academy ❤နှလုံးခုန်သံလေးနဲ့ ရိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ MC က Overpowerဖြစ်လွန်းလို့ နှလုံးခုန်သံလေးနဲ့တင် ရန်သူကိုသတ်တဲ့ကားလေးပါ။နတ်ဆိုးဘုရင်ကြီး တစ်ယောက် အသေခံပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ အကြာ ပြန်ဝင်စားတဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေ ဆက်ဖြစ်ကြမလဲ?သူ့ကိုရော လူတွေက မှတ်မိကြလား? ဟုတ်ကဲ့! မမှတ်မိတဲ့အပြင် OP လွန်းလို့ ဘောင်မဝင်အံမကျတဲ့ ကျောင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခံလိုက်ရပါတယ် ။အဲ့မှာ သူ့ကို သတ်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းရဲ့ ရင်းမြစ်ပြန်ဝင်စားသူတွေနဲ့လည်း ဆုံပါဦးမယ်။ ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါ။